Real Madrid Oo Aan U Adeegsan Doonin Vinicius Junior Dalabka Kylian Mbappe'
HomeHoryaalka SpainReal Madrid oo aan u adeegsan doonin Vinicius Junior dalabka Kylian Mbappe’
April 17, 2021 Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa imaysan u qorsheysneen sidii Vinicius Junior qeyb ua dhigi laheyd heshiiska Paris Saint-Germain uga soo qaadaneyso Kylian Mbappe xagaagan.
Los Blancos ayaa weli lala xiriirinayaa Mbappe, kaasoo la filayo inay PSG ku iibiso suuqa soo socda haddii uusan qandaraas cusub u saxiixin kooxda heysata horyaalka Faransiiska.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in kooxda Zinedine Zidane ay diyaar u tahay inay ku darto Vinicius qeyb ka mid ah bedelka ciyaaryahanka reer France.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Marca , ciyaaryahanka reer Brazil ayaa haatan loo arkaa inuu yahay ‘lama taabtaan’ garoonka Bernabeu sababa la xiriira qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii 2020-21.
20 jirkaan ayaa dhaliyay lix jeer, waxaana uu diiwaan geliyay lix caawin 39 kulan oo uu saftay heer kooxeed xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan seddex gool iyo labo caawin 10 kulan oo uu ciyaaray Champions League.
Vinicius, oo in ka badan afar sano ay uga hartay qandaraaskiisa Madrid, ayaa ka soo muuqday dhamaan seddexdii kulan ee ay ciyaareen 30ka kulan ee La Liga intii lagu jiray xilli ciyaareedkaan.